Xasilloonida Kiraystayaasha waxay dhiseysaa Bulsho Xoogan
Inkastoo aan fahamno baahida loo qabo qoysaska in ay helaan deganaansho guri, waxan bilaabay inaan isweydiino su'aal muhiim ah dhawr sano ka hor: sidee baan u saameeynaa isbeddelka bedelaya nidaamyada si carruurta iyo qoysasku ay u abuuri karaan xallintooda dhibaatooyinka? Taasi waxay keentay faham weyn Guriyeynta sidii goob loogu talagalay wakiilada isbeddelka: dadka awood u leh inay dareemaan xasilloonida guryaha iyo shaqada iyada oo la kulmeysa baahiyo asaasiga ah kuwaas oo markaa awood u leh inay u horseedaan aragti cusub oo ah bulshooyinka ka sii wanaagsan sida.
Lix sano ka hor, Charles iyo wiilashiisa ayaa u soo guuray UrbanHomeworks guri. Guryahiisa iyo xiriiriyaal kale oo dheeraad ah ayaa shaqadiisii iyo jacaylkiisa u beddelay wakiilka isbedelka iyo hoggaamiyaha labadaba Urban Homeworks iyo bulshada weynta. Charles wuxuu billaabay laba faa'iido darajo ah oo lagu ballanqaaday in uu xoojiyo ragga iyo wiilasha si ay u kici karaan isaga oo kale. Waxa uu u horseedaa olole wacyigelin qoysaska, isaga oo bixiya boorsooyinka dugsiga iyo turkiga fasaxyada. Wuxuu qeexayaa naftiisa inuu yahay aabe dhammaan caruurtiisa xaafaddiisa (oo kaliya dhowr meelood oo ka fog xafiiska xafiiska Homeworks), sababtoo ah wuxuu doonayaa in wiilasha ay isku hareereeyaan caruur kale oo dareema dareemid ammaan, farxad, iyo hal abuur. Sanadkii 2017, wuxuu bilaabay Ololaha Rabshadaha Dhallin-yarada Dhibta ah, wuxuu naga helayaa maal-galiyeyaal iyo taageero annaga iyo sidoo kale kaniisadaha iyo ganacsiyada ee ku yaal Northside Community halkaas oo uu ku nool yahay. Adoo helaya meel aad ku wacdid guriga, wuxuu awoodey inuu ogaado doorka uu bulshada ku leeyahay sida wakiilka isbeddelka.
"Waxaan u shaqeynayaa in aan noqdo aabe wax aan ka badnayn caruurta kaliya. Carruurtaydu waa inay iskaashi la yeeshaan dadka aduunka oo dhan, waxaanan rabaa in ay wax wanaagsan noqoto. " -CUMARKA
Guulaha Charles wuxuu caddeeyaa awoodda bulshada, awooda rajada iyo awoodda deriska wanaagsan. Iyadoo loo marayo dib u soo celinta, dib u soo celinta iyo dib u soo celinta dhammaan noocyada guryaha ee dadka u baahan inta badan, waxaan awoodnaa inaan dhisno xaafadaha halkaasoo rajada, sharafta iyo isbeddelka loo gubo maalin kasta.